Global Voices teny Malagasy » Ahoana ny fomba ataon’ny literatiora nentindrazana Nepaley hametraka marika eo amin’ny sehatra erantany? · Global Voices teny Malagasy » Print
Ahoana ny fomba ataon'ny literatiora nentindrazana Nepaley hametraka marika eo amin'ny sehatra erantany?
Voadika ny 27 Jona 2020 15:55 GMT 1	 · Mpanoratra Sangita Swechcha Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fiteny, Hafanàm-po nomerika, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Tantara, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Sasany amin'ireo boky Nepaley naranty nandritra ny Volan'ny Literatiora Nepaley tao amin'ny GLLI. Sary an'ny mpanoratra.
Toniandahatsoratra nahazo fanasàna avy amin'ny GLLI no nanoratra ity lahatsoratra ity nandritra ny Volana ho an'ny Literatiora Nepaley.
Na eo aza ny tantara manankarena  ananany momba ny fanontàna boky, dia zara raha fantatry ny mpamaky erantany ny literatiora nentindrazan'ny ao Nepal. Nandritra ny taonjato faha-20, raha natombok'ilay Nepaley mpanoratra, Laxmi Prasad Devkota , ny fombam-panoratana sy fandikàna ho amin'ny teny anglisy, tsy nitohy naharitra ela io fironana io no sady tato anatin'ny taompolo roa na telo monja vao nanomboka nitombo tsikelikely ny isan'ireo boky nepaley nosoratana ho amin'ny teny anglisy. Na izany aza, araka ny ambaran'ny  mpandika lahatsoratra sady mpikaroka, Mahesh Poudel, mbola tena an-jorombala be ny literatiora nepaley eo amin'ny sehatry ny fanontàna asa soratra mifantoka amin'ilay faritra, ary zara raha hita any anatin'ireo diary malaza sy amboara voafantina erantany. Maro be ireo asa fanontàna miandry fandikàna azy, ary tsy afa-bela amin'izany ireo boky  nosoratana Nepaley mpanoratra malaza. Isan'ny tafiditra ao anatin'ireo fanamby goavana atrehana ny sandam-pandikàna sy ny tataon-ketra, hatramin'ny tsy fisian'ny fiarahana miasa eo amin'ireo trano mpanonta boky ao an-toerana sy any ivelany, raha ny nambaran'i  Bhupendra Khadka, mpanonta.
Ny Novambra 2019, ny Global Literature in Libraries Initiatives  (GLLI) ao Etazonia dia nampiantrano iray volana virtoaly ho an'ny literatiora nepaley  hanehoana amin'izao tontolo izao ny literation nepaley. Ny Jona 2020, nanaovan'ny Global Voices antsafa tamin'ny alàlan'ny imailaka ny lehiben'ny famoahandahatsoratry ny GLLI, Karen Van Drie,  mba hahafahana mahazo topimaso momba ny literatiora nepaley ao anatin'ny tontolon'ny asa soratra erantany.
GV: Inona no vina ho an'ny Literatiora Nepaley (na ny voasoratra amin'ny teny anglisy na ny nadika ho teny anglisy) ao anatin'ny tontolon'ny literatiora erantany? Ary inona no hoavin'ny literatiora nadika any amin'ny tany Tandrefana?
KVD: Ny kolontsain'ny teny anglisy tsy dia misokatra loatra ho amin'ny literatiora nadika araka ny tokony hataontsika. Lehibe amin'ny endriny hita maso ny firenentsika ka, amin'ny maha-mpamaky antsika, mampananosarotra ny fanarahana ny onjan'ireo fanontàna boky izay ataontsika ihany, tsy resahana intsony ireo asa vokatry ny kolontsaina hafa. Tsy io no toetra tokony haseho, satria betsaka ny zavatra avy amin'ny firenena hafa azontsika ianarana. Ankehitriny, 3% monja amin'izay asa fanontàna nataontsika eto Etazonia isantaona no mba voadika avy amin'ny fiteny hafa.
Saingy misy marika roa mihoatra lavitra noho ny literatiora mampiseho fa afaka hihatsara ny toedraharaha. Sambany, sarimihetsika vahiny iray antsoina hoe Parasite , avy any Korea Atsimo, no voafidy ho sarimihetsika tsara indrindra ho an'ity taona ity tao amin'ny Oscar. Ary koa, mameno ny tahirim-botoatiny amin'ireo fantina avy amin'izao tontolo izao ny Netflix . Ary, ny marika fahatelo mahavelona fanantenana dia misy ireo trano vaovao mpanonta boky no manomboka mamoaka literatiora nadika.
Ireo fironana rehetra ireo dia mety hanosika ireo mpamaky amin'ny teny anglisy ho vonona kokoa hanandrana ireo lohateny avy amin'ny kolontsaina avy lavitra.
Literatiora Nepaley naseho nandritra ny fampirantiana ‘Nepal Yatra’ tamin'ny 2019 tao amin'ny Teatira Hawth, Fanjakana Mitambatra. Sary an'ny mpanoratra.
GV: Ahoana no hahitan'ireo mpamaky erantany misimisy kokoa ny literatiora nepaley? Manana sosokevitra ve ianao mety ho afaka hanampy ny literatiora nepaley hametraka marika eo amin'ny sehatra erantany?
KVD: Mba hahitan'ireo mpamaky erantany misimisy kokoa ny literatiora nepaley, mety ho fomba iray hitako ny famadihana ireo mpizahatany sy mpitsidika an'i Nepal ho lasa mpisolovava ny literatiora nepaley.
Isaky ny misy olona mangataka fanazavana momba an'i Nepal alohan'ny hankanesany any, mba mahazo fampahafantarana momba ny literatiora voasoratra ao an-toerana koa ve ry zareo ireny? Mba manana lohateny telo novokarina tao an-toerana ka azony aroso ho toy ny boky tsara ho vakiana ho an'ireo vahiny tonga mitsidika ve ny tsirairay izay misehatra amin'ny fizahantany iraisampirenena? Mba mangataka amin'ireo masoivohony manerana ny tany ve ireo mpisolovava ny literatiora nepaley mba hanasongadina mpanoratra ao amin'ny pejy Facebook-ndry zareo? Ary koa, ny fampidirana lohateny nepaley amin'ireo fifaninanana boky dia fomba iray hamelàna ny tsirairay ho lasa mpanao doka ho an'ny asa fanontàna nataonao raha toa ka mandresy ilay bokinao.
Ny zavatra voamariko dia tsy afaka vidiana avy hatrany amin'ny endrika ‘e-book’ (boky elektrônika) ireo boky nepaley. Rehefa mamaky famintinana lohateny iray ny olona, eo izy no tena voaainga fanahy hividy boky iray. Tokony ho avy hatrany dia azo raisina amin'ny endrika elektrônika izay boky izay.
Ny zavatra faharoa tiako hanampiana an'izay dia rehefa mitady boky iray miresaka lohahevitra manokana momba an'i Nepal ny olona, dia toa ireo boky momba ireo olana goavana ananany ary nosoratan'ireo vahiny mpanoratra, fa tsy Nepaley, no voalohany indrindra tadiavin-dry zareo. Ny endriny ivelany no itsaran-dry zareo ny boky, mahatonga azy ho afaka mifaninana sy maha-te-ho tia kokoa araka izay tratra. Aza diso hevitra, ireo tranga sy olana tena mahasarika indrindra ao Nepal, dia misy ireo teratany mpanoratra manoratra momba azy ireny.
GV: Manana traikefa efa taompolo maro ianao nitondràna ny literatiora erantany ho tonga any anatin'ireo tranomboky. Ahoana no fomba mila ataon'ny literatiora nepaley mba ho hita any anatin'ireo tranomboky eran'izao tontolo izao?
KVD: 1) Mampiasa vola, amin'ny maha-firenena, amin'ireo asa fandikàna mampitolagaga. Fisoloana vava tsy mitsahatra ho an'ireo mpanoratra ny asa fandikàna lahatsoratra.2) Mikarakara fetiben'ny literatiora izay anasongadinana ireo boky sy ny firenena. Heveriko fa efa manao izany ianareo.
3) Fameno iray ho an'ny fetiben'ny literatiora, dia afaka apetraka ny fandaharanasa famatsiambola ho an'ireo trano fanontàna liana amin'ny famokarana zava-baovao ao amin'ny firenenao. Mamondrona an-dry zareo mandritra ny andro telo, ka ry zareo ihany no asaina miantoka ny tenany, mba hihaona sy hifandray amin'ireo trano lehibe fanontàna no sady hamantatra momba ireo mpanoratra ary mpandravaka boky ao Nepal. Ataovy izay hahaliana an-dry zareo hamoaka ireo bokinareo ho amin'ny fitenin-dry zareo
4) Tsena amin'ny fiteny anglisy toy ny ahoana no manana fifamatorana amin'i Nepal? Ohatra, ao amin'ny fanjakana amerikana ao Colorado, ny zavatra mahafinaritra ataon'ny olona dia ny mametraka tanjona iray hitety ireo tendrombohitra tsirairay manana haavo mihoatra ny 4.200 metatra ao anatin'ilay fanjakàna. Misy 54 izy ireny. Azoko sary an-tsaina ery ny mety horaisin'ireo mponina ao Colorado miaraka amin-javatra nepaley maro. Ahoana no hikendrenareo ireny tsena ireny manokana ?
5) Aza tsinontsinoavina ny herin'ny hainahandro mba hisintonana ny olona erantany ho liana amin'ny literatioranareo. Ireo boky momba ny fahandroana sakafo mifandray amin'ny hainahandro nepaley sy mpisolovava natoraly iray afaka miketrika sy mivarotra ireo boky amin'ny teny anglisy dia efa teboka iray fampidirana manaitaitra hianarana misimisy kokoa momba ny kolontsaina .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/06/27/148545/
 Laxmi Prasad Devkota: https://en.wikipedia.org/wiki/Laxmi_Prasad_Devkota
 araka ny ambaran'ny: https://glli-us.org/2019/11/16/nepali-literature-needs-more-attention-and-visibility-in-the-world-an-interview-with-author-translator-mahesh-paudyal/
 raha ny nambaran'i: https://glli-us.org/2019/11/04/international-collaboration-is-the-key-in-bringing-nepali-literature-to-the-external-world-an-interview-with-publisher-bhupendra-khadka/
 Global Literature in Libraries Initiatives: https://glli-us.org/
 iray volana virtoaly ho an'ny literatiora nepaley: https://glli-us.org/tag/nepali-literature/
 Karen Van Drie,: https://twitter.com/worldlibraries